I-ANC izobikela i-IEC ngemibala yeqembu likaMakhosi Khoza | News24
I-ANC izobikela i-IEC ngemibala yeqembu likaMakhosi Khoza
Cape Town - I-African National Congress izofaka isimangalo kwi-Electoral Commission of South Africa (IEC) mayelana nemibala kanye uphawu (logo) lweqembu likalowo owayeyiLungu le-ANC ePhalamende uMakhosi Khoza, i-African Democratic Change (ADeC).
UKhoza wethule iqembu lakhe elisha ngoLwesihlanu eBraamfontein, eGoli, ngesikhathi kubanjwe inkomfa yokwethulwa kwalo. Kulo mcimbi, uKhoza uthe leli qembu lizokugwema ukuphinda amaphutha enziwa yi-ANC, etshela izethameli ukuthi i-ADeC izohola ngokwethembeka.
Nokho, i-ANC iyakhala ngophawu kanye nemibala yaleli qembu elisha, kusho okhulumela uKhongolose uZizi Kodwa ngoMsombuluko.
"INingizimu Afrika ibuswa yintando yeningi futhi inamaqembu amaningi ezombusazwe, ngakho sikwamukela ngezandla ezimhlophe ukuthi kube khona abanemibono eyehlukile kuneyethu," kusho uKodwa.
OLUNYE UDABA: UMakhosi Khoza uzohola umbutho ozongenela ukhetho luka-2019
"Kepha i-ANC ikuqaphele ukuthi ngesikhathi kwethulwa i-ADeC ubuholi bayo benze ngamabomu ukuba bukopele imibala kanye nophawu lwe-ANC."
Ukusetshenziswa kombala omnyama, oluhlaza satshani kanye nosagolide kanjalo nangendlela esetshenziswe ngayo kubukeka "kuyisenzo samabomu" ukuqikelela ukuthi kufana nse nokwe-ANC, esho.
"Ukuthi i-ADeC isebenzise le mibala, ngokulandelana kwayo, kutshengisa ngokusobala ukuthi inezinhloso ezithile.
"Kubukeka kuyimizamo yokuheha abalandeli ngenhloso yokudukisa, kanti lokho kuyadabukisa kakhulu."
UKhoza akatholakalanga ngokushesha ukuba aphawule.